မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် မုန်းတီးမှုများ
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် မုန်းတီးမှုများ
ဘာသာပြန်သူ - ဆောင်းသစ္စာ (စင်ကာပူရ)
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ လက်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ. ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှု အရှိန်ကို များစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူမျိုးစု များအကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဒါဇင်နဲ့ချီ လူများသေဆုံးပြီး၊ လူသောင်းနဲ့ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာဆိုရင် အဆိုးရွားဆုံး လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပို၍ အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ ယခုအကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကို မြန်မာမီဒီယာများ၌ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်လူမျိုးစု များကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆယ်စုနှစ်အတွင်း .....
ရည်ညွှန်း တိုက်ခိုက်လိုကြောင်း ဖေါ်ပြလျက်ရှိခြင်း ပင်ဖြစ် ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ “ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသော ဘင်ဂါလီမျိုးနွယ်စပ် “ များလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မျိုးနွယ်စုဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်ခွင့် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရပြီး ၊ မြန်မာလူမျိုးအများစုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မုန်းတီးမှုကိုသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး ၀ါဒဖြန့်မှုများဟာ ပြည်တွင်း အဓိက သတင်းမီဒီယာ နှင်. ဗမာလူမျိုးများရဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ များ၌ပါ ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုမျှမကသေး ဒီ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးအမြင်များဟာ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းမီဒီယာဂျာနယ်လစ်များ နှင့် သာမန်လူထုအတွင်း ကိုပါ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလိုနေပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူများ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ “ ဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ကောင်တွေဟာ လူလိမ်တွေဘဲ” လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှာ ဆိုရင် “ဒီကုလား တွေ အားလုံးကို သတ်ပြစ်ရမယ်” ၊ ကုလား ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဆိုရင် အသားအရောင် မည်းမှောင်သော အိန္ဒိယတိုက် နွယ်ဖွားများကို ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူများစုကြီးက လူမျိုးရေးအရ နှိမ်ချခေါ်ဝေါ်သော အခေါ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ ၈၈ ကျောင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ‘ ကိုကိုကြီး ’ က ဒီရိုဟင်ဂျာများသည် လူလိမ်များ ၊ အခွင့်အရေး သမားများ အဖြစ် ထုတ်ပြော သွားခဲ့ပါတယ်။
ယခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်မှု ရှိကာစ မီဒီယာ၏ အရေးကြီးသော နေရာမှ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလျှင် မှားမည်မထင်ပါ။
ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အလွန်အင်မတန်မှ မတိကျမသေချာသော ကောလဟလများ ဟာ မြန်မာ ပြည်တွင်းမှာပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်မီဒီယာအများစု မှာဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာများကို အယ်လ်ကေးဒါး စစ်သွေးကြွများ၊ ဘန်ဂါလီ စစ်သွေးကြွများအဖြစ် စွပ်စွဲဖေါ်ပြလျက်ရှိပါတယ်၊ အာရှဒေသကို အစ္စလာမ်ဘာသာ ပျံ့နှံ့ ဖို့အတွက် စစ်သွေးကြွ နေကြသူများအဖြစ် လွန်လွန်ကျူးကျူး ပုံဖေါ်ကြပါတယ်။
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာဆိုရင်ဖြင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများ ၏ မီးပွားအစ ဖြစ်သော မွတ်စလင်လူငယ် ၃- ဦး မှ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းကလေးမသီတာထွေး အား မတရား ပြုကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ခံရတဲ့ အမှုကိစ္စအား ဓါတ်ပုံများဖြင့်ဝေေ၀ဆာဆာ ဖေါ်ပြခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ဆင်ဆာဥပဒေဖြင့် ထိုဂျာနယ်ထုတ်ဝေမှုကို ၀င်ရောက်တားဆီးခဲ့ရပါတယ်။
မမျှော်လင့်ဘဲဆိုသလို ဒီလွတ်လပ်မှုရှိကစ မီဒီယာဖေါ်ပြမှုဟာ အမြဲတစေ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဒုက္ခရောက်မှုများကို ဖေါ်ပြလေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများနှင်. ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာများ၏ ဖေါ်ပြမှုများနှင့်ထိပ်တိုက် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဆိုဆို ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့တရားဝင် ဖေါ်ပြချက်အရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုများ ဟာ ကမ္ဘာ့မှာ ဒုက္ခပေး အခံရဆုံးလူမျိုးစု တစ်စုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ ဒုက္ခရောက်မှုများ ကို ဖေါ်ပြနေသော နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများနှင်. ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာများကို သပိတ်မှောက်ကျရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၀ဘ်ဆိုက်ဒ် များပေါ်တွင် လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ဒေါသထွက်လျက်ရှိသော အချို့ ဆန္ဒပြသူများက ဘီဘီစီ ၊ ဒီဘီဗီ အစရှိသော သတင်းဌာနများကို “ ဘန်ဂါလီ ဘရုပ်ကက်ဆ် ကိုပရေးရှင်း (ဗြိတိသျှအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းကို ဘန်ဂါလီ အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်၎င်း) ၊ ဒီစပရိတ် ဗွိင့်စ် အော့ဘန်ဂါလီ” (ဒီမိုကရက်တစ် ဗမာ့အသံကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော ဘန်ဂါလီအသံ ဟူ၍၎င်း) နာမည်ပျက်များပေးကာ လှုံ့ဆော်ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ်။ နော်ဝေ နိုင်ငံ အခြေစိုက် ဒီဘီဗီ သတင်းဌာန ဟာဆိုရင် မြန်မာ ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှု အရှိဆုံး ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာများ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ သို့သော် လက်တလော အခြေအနေမှာ ဒီဘီဗီ သတင်းဌာနရဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ နှင့် ၀ဘ်ဆိုက်ဒ် များမှာ နေ့စဉ်ဆိုသလို လူမျိုးရေး ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်လို လူများ၏ စာသား ကော်မန့်များဖြင့် ပြည့်လျက်ရှိပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်၇ာ အကြမ်းဖက်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့ ကြီးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားရာမှ ဒီအကြမ်း ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ.လက်တလော နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲ မှုများကြောင့်ဖြစ်သလို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရမယ့် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများအတွက် ကြီမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှုများသာမက သတင်းစာဂျာနယ် မီဒီယာ လွတ်လပ်မှုအပေါ် တာဝန်ယူ အသုံးချ တတ်မှုများစွာ လိုအပ်နေသေးကြောင်း ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ.လက်တလော နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲ မှုများကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အစိုးရအနေဖြင့် တရားမျှတမှန်ကန်သော ဘက်လိုက်မှုကင်းသော နည်းဥပဒေများကို အသုံးပြုကာ ဒီရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာလူမှု့အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အသားအရောင် ၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြား နှိမ်ချဆက်ဆံမှု နှင့် အစိုးရ၏ လူမျိုးရေး ခွဲခြား နှိမ်ချဆက်ဆံသော ဘက်လိုက်မှု ရှိသော ဥပဒေများအားလုံးပေါင်းသည် ဤအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အခြေခံအကြောင်းတရားများပင် ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီမှ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးမှ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး (အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း လက်ထက် ၁၉၇၈ ခုနှစ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာများအား ရခိုင်ဒေသမှ မောင်းထုတ်သော စစ်တပ် စစ်ဆင်ရေး အမည်) ကဲ့သို့သော စစ်ဆင်ရေးမျိုးအမြန်ဆုံး ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာဘဲ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာပြီးနောက် မွတ်စလင်များ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်များ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ဖျတ်ဆီးမှု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ခင်ရီမှ မြန်မာပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာလုံးဝ မရှိပါဟု ထပ်မံငြင်း ဆိုပြန်ပါတယ်။ တပြိုင်တည်းဆိုသလို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိကြီးစွာဖြင့် ဤအငြင်းပွားဖွယ် ပြသနာကြီးကို ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် ဖြေကြား သွားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာမှလည်း မီးလောင်ရာလေပင့် ဆိုသလို လူမျိုးရေး နှိမ်ချသော အခေါ်အဝေါ် ကုလားဟု သုံးစွဲကာ မြန်မာ မွတ်စလင် ၁၀ ဦးတောင်ကုတ်မြို့၌ အသတ်ခံရသော သတင်းကို ကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ယခုလို လူမျိုးရေး နှိမ်ချသော အခေါ်အဝေါ် ကုလားဟုသုံးစွဲကာ ကြေငြာသွားခြင်းမှာ ပြသနာကို အေးချမ်းငြိမ်သက်အောင် ပြုလုပ်မည်ဆိုသော အစိုး၇၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားမှာ သံသယ ရှိဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တကယ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာမှု ဖြင့်သာ ဤရိုဟင်ဂျာပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤရိုဟင်ဂျာပြသနာသည် အလွန်အင်မတန် ရှုပ်ထွေးပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်သော ပြသနာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လျစ်လျူရှူလို့မရနိုင်ပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် နိုဘယ်ငြီမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကဲ့သို့သော် နိုင်ငံဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲပြီး ဤပြသနာကို ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ ယခုအချိန်၌ ဖြေရှင်း အဖြေရှာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကြီးမား စွာသော အနှောက်အယှက် တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီး နောင်အနာဂတ်တွင် ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်တော့သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။